News - Butyl အပူဒဏ်ခံနိုင်သောရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အသုံးချနည်းစနစ်များတွင် EPDM ရေမြှုပ်တိပ်၏အခန်းကဏ္။
ဘူတေးလ်ရာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ငွေ့စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနှင့်အပူခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောအပူဒဏ်ခံရော်ဘာထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုထားသောကြောင့်အပူခံနိုင်ရည်ရှိရေမြှုပ်ရာဘာထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းပြွန်အပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်လုပ်သူများက butyl အတွင်းပိုင်းပြွန်အပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သည် EPDM ရော်ဘာသို့မဟုတ်ပြန်လည်အသုံးပြုရော်ဘာပမာဏကိုသင့်တော်စွာထည့်သွင်းပေးမယ်ဆိုတာသိထားကြပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ butyl အတွင်းပြွန်ရဲ့သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် butyl ရာဘာကုန်ကြမ်းအပူခံနိုင်ရည်ရေမြှုပ်အမြှုပ်ရော်ဘာထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ EPDM ရော်ဘာထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသလား? သို့ဆိုလျှင်ဖြည့်စွက်သောအခါမည်သည့်ပြissuesနာများကိုသတိပြုသင့်သနည်း
၁။ Butyl အပူဒဏ်ခံရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များတွင် EPDM ရော်ဘာ၏အခန်းကဏ္။
EPDM ရော်ဘာ / ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောရော်ဘာအတောင့်တင်းပြီးနောက်၊ butyl ရာဘာထုတ်ကုန်များသည်အိုမင်းပြီးနောက်တွင်နူးညံ့ပြီးစေးကပ်သွားမှာဖြစ်သဖြင့်သင့်တော်သော EPDM ရော်ဘာပမာဏကို butyl အပူဒဏ်ခံနိုင်သောရေမြှုပ်မှော်ရာထုတ်ကုန်များတွင် butyl ရာဘာ၏ချွတ်ယွင်းချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ butyl အပူဒဏ်ခံရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်။
EPDM ရော်ဘာ / ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောရော်ဘာနှင့် butyl ရာဘာ၊ အပူချိန်မြင့်မားမှု၊ အိုမင်းမှုခံနိုင်ခြင်း (အထူးသဖြင့်အိုဇုနျးခံနိုင်မှု) သည် butyl ရာဘာထက် သင့်လျော်သော EPDM ရော်ဘာပမာဏရှိ butyl အပူဒဏ်ခံရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များသည်အမြှုပ်ထုတ်ကုန်များ၏အပူခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးအိုမင်းခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဖြင့်အပူဒဏ်ခံရေမြှုပ်၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
၂။ EPDM ရော်ဘာရွေးချယ်မှုစွမ်းရည်ရှိ Butyl အပူဒဏ်ခံရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များ
EPDM ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောရော်ဘာကုန်ကျစရိတ်မှအပူဒဏ်ခံရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် EPDM ရော်ဘာပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း။ EPDM ရော်ဘာရောစပ်မှုသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း EPDM ရော်ဘာထုတ်ကုန်များပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော EPDM ရာဘာမြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့် EPDM ရော်ဘာများသည်အခြေခံအားဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းမှာမူရင်း EPDM ရော်ဘာထက်များစွာနိမ့်သည်။ ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုလျှော့ချရသည့်အကြောင်းအရင်းအောက်တွင် Butyl အပူဒဏ်ခံရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များ၏ပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ အပူဒဏ်ခံနိုင်သောရေမြှုပ် 2LLYY422-SJ ထုတ်ကုန်များ၏ပိုမိုတင်းကြပ်သောလိုအပ်ချက်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ရော်ဘာထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများသည်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် butyl ရာဘာဖြင့်သင့်လျော်သော EPDM ရာဘာနှင့်ရောနှောနိုင်သည်။
3. EPDM ရော်ဘာနှင့် butyl ရာဘာကြော vulcanization မြန်နှုန်းကိုဘယ်လိုထိန်းညှိမလဲ
ငါတို့သိသည့်အတိုင်းရေမြှုပ်ကောင်များနှင့်ရေမြှုပ်ကောင်များ၏ vulcanization ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပြုလုပ်သည်၊ မြှုပ်နှုန်းထက်ပိုမြန်သောသို့မဟုတ်မြှုပ်နှုန်းထက်ပိုမြန်သောရေမြှုပ်နှုန်းသည်ရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များ၏မြှုပ်သက်ရောက်မှုနှင့်မြှုပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်ရောက်လိမ့်မည်။ butyl Rubber နှင့် EPDM ရော်ဘာ vulcanization စွမ်းဆောင်ရည်၊ မီးတောင်အခြေအနေများသည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ရာဘာထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများသည် vulcanization system ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းဖြစ်ရခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ရေမြှုပ်ခြင်းနှင့်မြှုပ်ခြင်းများကိုသေချာစေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရော်ဘာထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများကရော်ဘာအရှိန်မြှင့် DM ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အမြှုပ်ထုပ် OBSH အမြှုပ်များအသုံးပြုခြင်း၊
EPDM ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောရော်ဘာသို့မဟုတ် EPDM ရော်ဘာများအသုံးပြုခြင်းသည်ဘတ္တလင်းအပူဒဏ်ခံရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်တမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အသုံးပြုခြင်း၊ ရာဘာထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများသည်ပုံသေနည်းတွင်အခြားကိုက်ညီသောအေးဂျင့်များ၏အမျိုးအစားနှင့်ပမာဏကိုသင့်လျော်စွာချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ ပါ ၀ င်သောကာဗွန်အနက်ရောင်အားဖြည့်ခြင်း၊ ပါ ၀ င်သောရေနံပျော့ပြောင်းခြင်း၊ ပါဖင်ဖယောင်းအားအိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း၊ butinc / EPDM ရော်ဘာအပူဒဏ်ခံရေမြှုပ်ရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရန်အတွက်ဇင့်အောက်ဆိုဒ်၊ stearic acid နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အောက်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုတို့ပါဝင်သည်။ stearic acid နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အောက်ဆိုဒ်သည် butyl / EPDM အပူခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များ၏စုစုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်တမ်းကိုပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။